HORDHAC : Arsenal VS Manchester United ? xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey . – Gool FM
(Premier League ) 10 MAR 2019 Kooxda Arsenal oo guul daro xanuun badan ay ka soo gaartay kooxda Rennes kulan ka tirsanaa tartanka Europe League ayaa markan garoonkeeda ku qaabili doonta kooxda Mnachester United oo qaab mucjiso leh ugu soo gudubtay wareega xiga ee tartanka Champions League kaddib markii ay cashar lama ilaawaan ah ay u dhigeen kooxda reer PSG.
Waa kulan labada kooxba aya muhiim u atahay guusha , madaama ay ku tartamayaa booska afaraad ee lowgu soo baxo ciyaaraha Cahmpions League , United waxaa safkooda dib ugu soo laabtay ciyaartoy muhiim ah halkaa Arsenal aysan qabin wax dhaawacyo ah .
Arsenal’ khadkeeda dhexe ee Lucas Torreira ayaa qaadan doono sedex kulan oo ganax ah kaddib markii uu qaatay calaamada gaduudan kulan ciyaareedkii ay bareejada la galeen kooxda ay isku magaalda ay ka dhisanyihiin ee Tottenham.
Xidiga reer Farance ee Alexandre Lacazette ayaa dib ugu soo laabnaya kooxdiisa kaddib markii uu seegay kulan ciyaareedkii khamiista oo ay guul darada kala kulmeen kooxda Rennes .
Dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa heli karta xidigeeda Anthony Martial kaas oo mudooyinkan ka dhaawacnaa waxa uuna qeyb ka haa 10-xidig oo seegay kulankii lugtii labaad ee tartanka Champions League oo ay la ciyaareen kooxda Paris St-Germain .
Eric Bailly ayaa si wanaagsan uga soo kabsaday dhaawac fudud oo ka soo gaaray kulankii PSG , sidookale xidigaha kala ah Nemanja Matic iyo Ander Herrera ayaa diyaar u ah kulanka.
Paul Pogba ayaa dib ugu soo laabanaya kooxdiisa kaddib markii qaab ganaax ah ku seegay kulan ciyaareedkii ay guusha weyn ka gaareen kooxda Reer Farnce ee PSG .
Kulanka :Arsenal VS Manchester United
Goobta :Emirates Stadium
Goorta : 7:30 oo habeenimo
Garsoorka : Jonathan Moss
Manchester United’ayaa ku badaniyesay labadii kulan ee ugu dambeyey ee ay Arsenal ku booqatay garoonkeeda Emirates Stadium 3-1.
Kooxda Manchester United ayaa ka adkaan karta dhigeeda kooxda Arsenal sedex kualn oo xiriir ah oo garoonkooda ah markii ugu horeysay tan iyo 1983 ilaa 1985.
Arsenal ayaa guul daro la’aan ah 14-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku ciyaarto garoonkeeda (12-guul iyo 2- bareejo), iyaga oona si xiriir ah u badinayey sideedii kulan ee ugu dambeyey.
Arsenal ayaa garoonkeeda ku heshay 38-dhibcoood kulamada Premier League waana kooxda labaad ee ugu badan mareka laga soo tago Manchester City’ oo ku heshay garoonkeeda 45-dhibcood .
Ole Gunnar Solskjaer ayaa noqon kara macalinkii ugu horeyey ee Manchester United ee ka adkaada kooxda Arsenal labda kulan ee ugu horeeya ee uu ku wajaho garoonkooda dhamaan tartamada .
Chris Smalling ayaa safan kara kulankii 200-aad ee Premier League halka kabtan Laurent Koscielny uu isna safan doono kulankii 250-aad ee horyaalka Premier League.
Eeg shaxaha macquulka ah :
HORDHAC : Chelsea VS Wolves ? ee horyaalka Premier League